Iimpazamo ezi-6 ekufuneka uzenzile kwimarike yemasheya | Ezezimali
Njengoko bonke abatyali mali besazi, naziphi na iimpazamo kwisicwangciso sakho sotyalo-mali zinokucaphukisa izicwangciso zakho zokwenza ulondolozo lwakho lube nenzuzo. Ke ngoko, enye yeenjongo zakho ezingxamisekileyo kufuneka isekwe ngaphezulu kwako konke ungazinikeli nangayiphi na indlela. Ngezikhokelo ezithile ezilula zentshukumo esiza kuzisa kuwe ukusukela ngoku, ngaphandle kwamathandabuzo uyakufumana umhlaba omninzi wokufikelela kurhulumente kwimisebenzi enqweneleka ngokupheleleyo kwimidla yakho kwilizwe lemali-
Zindlela zokupheka ezingayi kukudlela imali eninzi ukuzenza. Kodwa ngokuchaseneyo, iya kufuna wena kuphela uqeqesho oluncinci kunye nethamsanqa elincinci ukufikelela kwinjongo efunekayo, ekungekho enye ngaphandle kokuvelisa inzuzo enkulu kwiimarike ze-equity. Bobabini kuzwelonke nangaphandle kwemida yethu ukuze bangathinteli umhlaba wento kwintengiso yesitokhwe. Ngokusebenzisa ezinye izindululo ezinokuthi ngamanye amaxesha zikothuse ngokuvela kwazo.
Kule meko ngokubanzi kwiimarike ze-equity kuya kuba kubaluleke kakhulu ukuba unokholo kuyo yonke into oyenzayo. Nangona ukukunceda zifezekise iinjongo zakho Ngokukhawuleza akukho nto ibhetele kunokudweliswa kweengcebiso ezithile ezijolise ekuphepheni iimpazamo kwiimarike zemali ukusukela ngoku. Hayi ngelize, kulapho ithamsanqa liya khona ekusebenzeni kwesitokhwe sakho. Njengalezo sizicebisa apha ngezantsi.
1 Musa ukuthenga kwiindawo eziphakamileyo
2 Sukukhetha amaxabiso e-bearish
3 Thintela amaxabiso angaziwayo
4 Uzinzo kumaxabiso akho
5 Sukucinga ngentengiso yentengiso
6 Andiwahloniphi amanani ohlalutyo
Musa ukuthenga kwiindawo eziphakamileyo
Enye yezona mpazamo zixhaphakileyo kubatyali zimali abancinci nabaphakathi kukwenza ukuba ukuthengwa kwabo kwenziwe ngokusesikweni ngamaxabiso aphezulu kakhulu. Kuba kusengqiqweni ukuba kunjalo izilungiso ezilindelekileyo kwiimarike ingeniso eguquguqukayo. Apho unokulahlekelwa khona ngakumbi kunokuba uzuze. Ayothusi into yokuba bathambekele ekubeni nomendo onyiniweyo kakhulu kuyo yonke imiqathango yokusisigxina: imfutshane, iphakathi kwaye iphakamileyo. Ungakulibali ukuba awufuni ukuba nenye ingxaki kwezi zihlandlo zichanekileyo.
Kwelinye icala, awungekhe ulibale ukuba le yimpazamo enokuthintelwa ngokulula kuba unokukhetha amaxabiso esitokhwe ngexabiso elifanelekileyo kwaye ke sikulungele kakhulu ukuqeshwa ngalo lonke ixesha. Ngaphandle kokuthatha umngcipheko ogqithileyo ekusebenzeni kwiimarike zezabelo. Uya kuba nokukhetha ngakumbi ukwenza iintshukumo zinenzuzo kwiindawo zesizwe okanye ngaphandle kwemida yethu. Ngenjongo yokufumana imbuyekezo ekugqibeleni kwimali ekhoyo.
Sukukhetha amaxabiso e-bearish
Elinye lamaqhosha okwenza ukuba imisebenzi yakho ibe nenzuzo kwimarike yemasheya ukusukela ngoku. Ayilolize, ukuba uyenza ngale ndlela, amathuba akho okuqhubeka nokuphumelela uthathe le meko intle Inxulumene nelizwe elihlala linzima lemali. Asinakho phantsi kwazo naziphi na iimeko ukuba ukutyala imali kwimarike yemasheya kufuna oku. Ukuya kwinqanaba lokuba kufuneka uye kwizitokhwe ezichazayo. Ngabo banezona ndlela banokukhetha kuzo ukuzuza ngempumelelo ngakumbi.
Kuya kufuneka ukhumbule ukuba la maxabiso unqabile kancinci ngaphambili. Ngokukodwa kwimeko yokunyuka simahla, elilelona nani lihle kakhulu kuhlalutyo lobuchwephesha. Banendlela ephezulu ngaphezu kokubaluleka, apho unokufumana khona ii-euro ezininzi ekusebenzeni kwiimarike ze-equity. Nangona ambalwa kakhulu amaxabiso afunyenwe kule meko ikhethekileyo.
Thintela amaxabiso angaziwayo
Esinye isitshixo sokwenza imisebenzi yakho kwiimarike zezabelo kuhlala kukhetha ukhuseleko oqhele ukusebenzisela olu hlobo lwemali. Kwelinye icala, zingamanzi ngakumbi kwaye ungangena kwaye uphume kwizikhundla zawo ngaphandle kwazo naziphi na izehlo zobuchwephesha. Ngaphandle kokuba ulikhobokaOko kukuthi, kude kakhulu nexabiso lokuthenga. Le nto ibaluleke kakhulu kwiiprofayili zabatyali mali ezikhuselayo okanye ezinqabileyo njengoko zibonelela ngozinzo olukhulu kwizikhundla ezivulekileyo.
Ngelixa kwelinye icala, kufanelekile ukuba nefuthe kumgangatho wobuchule bomlinganiso ngenxa yawo ukuthintela ukuphelisa uthotho lokhuseleko olungafezekisiyo le mfuno ibalulekileyo yokuphumeza eyona mali uyifunayo. Ayothusi into yokuba iyanceda ukuba ukhethe olona khetho lufanelekileyo kwiimarike ze-equity. Ngaphandle kokwenza iinzame ezigqithileyo kulungelelwaniso olululo lwesicwangciso-qhinga. Oko kukuthi, emva kwayo yonke loo nto, imalunga nantoni na kwilizwe elinzima lotyalo-mali. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
Uzinzo kumaxabiso akho
Alithandabuzeki elokuba ukusebenzisa esi sicwangciso sokwenza utyalo-mali kukunceda ufezekise ezona njongo zakho zikwi-stock market. Kuba, kunjalo, kulungile ukuba ukhuseleko alubandakanyi nakuphi na ukungazinzi kuqwalaselo lwamaxabiso abo kwaye sesona sizathu se ukuphazamisa imisebenzi emininzi eqhutywa ngabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngokuqinisekileyo kuya kwenzeka kuwe ngaphezulu kwesihlandlo esinye kwiminyaka yakutshanje. Kuyimpazamo ke ukuba kufuneka uphephe kuzo zonke iindleko ukuba awufuni ukuba noloyiko oluthile kutyalo-mali kula maxesha.
Kwelinye icala, kukwafanelekile ukuba uthathe ingqalelo yokuba le nto inokukukhokelela kuyo yenza iimpazamo ezingeyomfuneko ngokupheleleyo yeminqweno yakho kwilizwe lobudlelwane nehlabathi lemali. Ngakolunye uhlangothi, amaxabiso azinzileyo zezona zibuthathaka ukunika ukhuseleko ngakumbi kwimisebenzi yeemarike zezabelo nangaphaya kolunye uthotho lokuqwalaselwa kobuchwephesha ukufezekisa iinjongo ezicetyiswe kwesi sicwangciso sotyalo mali ekufuneka ubenazo kubalo ukususela ngoku ukuya phambili.
Sukucinga ngentengiso yentengiso
Alithandabuzeki elokuba ukuthintela ezi ndlela zokutyala imali kuya kukunceda uphephe iimeko ezingafunekiyo ezinokonakalisa iinjongo zakho kwiimarike zezabelo. Ukuya kwinqanaba lokuba inokuba yinto yokuphucula isikhundla sakho kuthengiso olwenziwe ngalo mzuzu. Ke ngoko, awuzukukhetha ngaphandle musa ukutyala imali yakho ekhoyo kwizibambiso zezi mpawu ngenxa yomngcipheko ocacileyo wale misebenzi. Kule nto, emva kwayo yonke loo nto, lolunye lweenjongo zakho ezikufutshane. Kwinto emiselweyo njengenye yezona ndlela zibalulekileyo onazo ngalo mzuzu.
Kwelinye icala, amaxabiso aqikelelweyo Banokumosha kwimisebenzi engaphezulu kwesinye kuba ungashiya i-euro eninzi endleleni kwaye le yinto ekufuneka uyiphephe kuzo zonke iindleko ukusukela ukuphela kwemali yimali yakho esemngciphekweni kwaye akufuneki wenze iimvavanyo kwiimarike ze-equity. Phakathi kwezinye izizathu kuba ungabhatala kakhulu ngalo mzuzu. Ke ngoko, lumka kakhulu ngolu didi lwamaxabiso lukhetheke kwaye kwangaxeshanye luyingozi kwiminqweno yakho, apho unokuthile okungaphezulu kokulahleka kunokufumana.
Andiwahloniphi amanani ohlalutyo
Le yenye yezona mpazamo zixhaphakileyo onokuzenza kwizicwangciso zotyalo-mali kwaye ungazilungisa ngokuhlonipha ngakumbi izixhasi kunye nokuchasana okuvela kuhlalutyo lobuchwephesha kwaye ukusukela ngoku ungazijonga. ngokusebenzisa imifanekiso Ungathethana namajelo eendaba onxibelelwano ngecandelo. Ngelixa ngokuchaseneyo, awungekhe ulibale ukuba ukulibala esi sicwangciso kunokukusa kumanqanaba anobungozi kwaye kunokubangela ukuba ulahlekelwe yimali ngendlela engalindelekanga. Njengendlela yokuzisola kakhulu yokungakwazi ukufezekisa iinjongo zakho ezikufutshane.
Okokugqibela, ukubonisa ukuba uhlalutyo lobuchwephesha kufuneka lusoloko longamela ulwazi ekufuneka ulunikezele ukuseka iphothifoliyo yakho elandelayo, kwixesha eliphakathi nelide. Oko kukuthi, emva kwayo yonke loo nto, ixesha lesigxina apho utyalo-mali lwakho kufuneka lujolise kulo kwaye kufuneka lwenziwe ngengqondo ecacileyo. Ngelixa kwelinye icala, awungekhe ulibale ukuba esi sicwangciso sotyalo-mali sinokuba yinzuzo kakhulu kwaye sinokukhokelela ekufumaneni imbuyekezo enomdla kakhulu eya kubonakala kwintsalela yeakhawunti yakho yokonga. Ngaphandle kwezinye izinto zobugcisa eziqwalaselweyo nangaphezulu kwezinye iindlela ezisisiseko.
Ngaphandle kokuba ukwazi ukwenza ezinye iimpazamo, njengoko kuqhelekile kwizenzo zenxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Kwaye oko kuvumela ukuba utyalomali lungaphuhlisi njengoko iminqweno yakho yayinjalo kwasekuqaleni. Ukuzama ukunqanda ezi zehlo ukuba ziphinde zenzeke kwakhona ukusukela ngoku. Ukuba yenye yeenjongo zakho kwangoko kuzo zonke iindawo zokujonga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Iimpazamo ezi-6 ekufuneka uzenzile engxoweni